Dr Barson Andriambololona – HCDDED “Tsy maneho demokrasia izany kandida tokana izany”
Anisan’ny mahatonga ny korontana misy eo anivon’ny tontolon’ny fanaovan-gazety eto Madagasikara, hoy ny talen’ny kabinetran’ny filankevitra ambony momba ny demokrasia sy ny tany tan-dalana na HCDDED eto amintsika
, ny Dr Barson Andriambololona, ny tafiditry ny politika loatra ny olafitr’io sehatra io eto Madagasikara. Tsara ny manao politika, hoy izy, fa tsy politika ifandroritana. Ianareo isan’ny fitaovana ilain’ny mpanao politika handresena lahatra vahoaka. Ny olona miady amin’ny mpanao gazety faran’ny olona adala raha hanao politika eran’izao tontolo izao. Aza miady amin’ny mpanao gazety! Tsy miteny izany hoe izay tianareo mpanao gazety atao atao eto amin’ny tany sy fanjakana fa ny miady be fahatany amin’ny mpanao gazety no tsy fanao. Ireo no mifehy ny tontolon’ny serasera ankapobeny. Ianao raha miady amin’ny mpanao gazety dia mamono tena. Ireo ao anatin’ny tontolon’ny fanaovan-gazety nefa diso miankin-doha be loatra amin’ny politika. Sintoninay mpanao politika dia lasa izy no rava. Misy tady be dia be mifanenjana ao. Raha hanangana holafitra dia ampirimo aloha ny loko politika fa ilay fanaovan-gazety akarina avo amin’ny toerana tokony hisy azy. Tafatsangana amin’ny toerana tokony hisy azy ilay holafitra dia afaka manao politika toy ny olompirenena rehetra avy eo ianareo. Sambany no nisy fifidianana, hatramin’ny nahafantarako azy, hoe tokana ny kandidan’ny mpanao gazety. Raha jerena ivelany io dia tena mahay miara-miasa ianareo satria tafitanareo ny fifanarahana rehetra ao anatiny dia hoe aleo ity no kandida. Tsara izany! Amin’ny lafiny iray maha HCDDED anay anefa dia tsy maneho ny demokrasia izany kandida tokana izany. Misy sakantsakana eo amin’ny lalana mifehy ny fifidianana ve na ny lalana mifehy ny filantsahan-kofidiana no nahatonga ny kandida tokana? Io olona iray io ihany ve no mahavita azy amin’ny lafiny pitsopitsony na “critère” ahafahana milatsaka? Ahoana marina ny fanaovan-gazety eto Madagasikara? Raha asa io dia tokony hisy sekoly ivoahana amin’izany satria tsy ho mpitsara na mpisolovava ianao raha tsy nivoaka tamin’ny sekoly ambony lalana. Tsy ho dokotera mpitsabo raha tsy nivoaka tamina sekoly ambony momba izany. Fa maninona no ialohavan’ny ministeran’ny serasera ny OJM nefa tokony hahaleo tena, hoy hatrany ny tenany ?